May 2013 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 4:53 PM | No မှတ်ချက် |
****သို့.....ချစ်သောဇနီး တဲ့ ****
လူတစ်ယောက်ဟာ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ အခန်းယူပြီး သူ့အခန်းထဲကို ဝင်တော့ အခန်းထဲမှာ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးတွေ့တာနဲ့ သူအတော် ဝမ်းသာသွားတယ်။ ဒီတော့ သူ့မိန်းမဆီကို လှမ်းပြီး သတင်းပို့မှပဲ ဆိုပြီး အီးမေးလ်တစ်စောင် ပို့လိုက်တယ်။
Author: lubo601 | 4:40 PM | No မှတ်ချက် |
by Eingyin Ta Khaine (Notes) on Friday, July 22, 2011 at 6:49am
သင်ရဲ့ ဘ၀ဟာ ခုဆို ဘယ်နှစ်နာရှိနေပြီလဲ။
စားပွဲပေါ်မှာတော့ ယူဆောင်မသွားဘဲ အမြဲတင်ထားတဲ့ စားပွဲတင် နာရီလေးက ရှိနေပါတယ်။ ပျက်နေတာလဲမဟုတ်ပါ။ ဘက်ထရီကို တမင် ဖြုတ်ထားခဲ့ခြင်းပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း သည်နာရီလေးဟာ အမြဲတမ်း ရပ်နေတာတော့လည်း မဟုတ်ပါ။
ဒေါ်လာဈေး ဘယ်လဲ _ မောင်မွှေး _ မြ၀တီ
Author: lubo601 | 4:29 PM | No မှတ်ချက် |
by Mdy Boy (Notes) on Thursday, May 30, 2013 at 4:43pm
မေလအတွင်း နေ့စဉ် ဒေါ်လာ ဈေးနှုန်းများ တရိပ်ရိပ် တက်လာ နေမှုများကြောင့် မေလ တတိယပတ် အတွင်း အခြေခံ ကုန်ဈေးနှုန်းများလည်း တဖြည်းဖြည်း တက်လာသည် ကိုလည်း တွေ့ရှိ လာရပါသည်။
ကျွန်တော်သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦး မဟုတ်သကဲ့သို့ စီးပွားရေး ပညာရှင် တစ်ဦးလည်း မဟုတ်ပါ၊ သာမန်ပြည်သူတစ်ဦီးသာဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ သာမန်ပြည်သူ တစ်ဦးအပေါ် ရိုက်ခတ် လာသော ကုန်ဈေးနှုန်း များကြောင့် ဒေါ်လာဈေး တက်လာမှု အပေါ် စိတ်ဝင်စားမိ ပါတော့သည်။ လက်လှမ်းမီသမျှ ဖတ်ရှု လေ့လာ ကြည့်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။
by Pandora Blogopoet (Notes) on Tuesday, May 28, 2013 at 12:20am
မျက်စိရှေ့ကို ရောက်လာသည့် စာအုပ်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်ပြီးမှ ပြန်ချပြီးတော့ ပြုံးလိုက်မိသည် ခက်။
ဂန္ထ၀င်ဝတ္ထုရှည် တစ်အုပ်ပါ။ Jane Austen ရဲ့ Sense and Sensibility။ အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေပြီး ဘယ်တော့မှ မဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်။ ကိုယ် မ၀ယ်ခဲ့ပါဘူး…။
ခွေးမြီး ပေါက်တဲ့ လူ
Author: lubo601 | 4:23 PM | No မှတ်ချက် |
by Than Min Lwin (Notes) on Friday, May 31, 2013 at 2:11pm
တစ်နေ့တွင် ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းသည် ညီလာခံ၌ ဦးပေါ်ဦးကိုမိန့်တော်မူသည်။
“မင်းကြီး မိုးဒါးစား အမတ်ကြီးဟာ ပညာဂုဏ်နဲ့ လွန်စွာမာန်စွယ်ပြတယ်လို့ ထင်တော်မူတယ် ”
ဟုမိန့်ကြားရာ အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦးက.....
““မှန်လှပါ၊ မိုးဒါးစားအမတ်ကြီးမှာ ပညာတည်းဟူသော အမြီးပေါက်ခြင်း သည် ခွေးမှာပေါက်တဲ့ အမြီးနဲ့တူပါတယ် ဘုရား၊
Author: lubo601 | 4:20 PM | No မှတ်ချက် |
by သက္က မိုးညို (Notes) on Thursday, May 30, 2013 at 10:09pm
ကြာလာရင် ဆရာဝန်နဲ့ မီဒီယာ (အထူးသဖြင့်) ဂျာနယ်တွေ အကြား သွေးမတိတ်တဲ့ အနာ ဖြစ်သွားမှာ စိုးရပါတယ်။ ဘယ်သူကစတယ်၊ ဘယ်ဝါက စတယ် စကားနိုင်လုနေရင် မပြီးတော့တဲ့အပြင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနာတွေပဲ တိုးလာမှာ မိုလို့ မေတ္တာစာ ရေးတဲ့ အလေ့အထကို ပြန် အသက်သွင်းရပါတယ်။ ရွှေနားတော်သွင်း ဧချင်းပေါ့လေ။
ဟာ…ဒင်းက ဆရာဝန်ပဲ ဆရာဝန်ဘက်ကိုပဲ “ပင်း” ပြီးရေးမှာပေါ့လို့ ယုဆကြရင်လည်း ဆက်မဖတ်ကြပါနဲ့ဗျာ။ (ဖြစ်စေချင်တာကတော့ အဲသည်လို ကြိုတင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မထားပဲ ဖတ်ပြီး ဘ၀င်ကျမှ ခေါင်းငြိမ့်၊ ဘ၀င်မကျရင်ခေါင်းခါ ဆိုတာမျိုးက ပို အဆင်ပြေမယ် ထင်တာပါပဲ)
ONE OF THE BEST VIDEO OUT THERE.. SHARE IT..
Author: lubo601 | 4:19 PM | No မှတ်ချက် |
~Spirituality Vs Materiality~ စိတ်တန်ဖိုး နဲ့ ရုပ်တန်ဖိုး
Author: lubo601 | 4:18 PM | No မှတ်ချက် |
Aung Myo Myat
Spirituality မြင့်မားတဲ့ လေးစားမြတ်နိုးဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တိုင်း ချယ်ရီမြေရဲ့ တေးသံရှင် စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကောင်းကင်ဘုံဆိုတဲ့သီချင်းလေး စိတ်ထဲအမြဲဝင်လာတယ်။
~ ငယ်စဉ်က... ကလေးတို့ဘ၀ဟာ ..... ပျော်ပါးဖို့ရာ လွယ်ပါတယ်....~~~
ကလေးဘ၀ရဲ့ Spirituality ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘ၀ရဲ့ ပုံသွင်းမူတွေကြားထဲမှာ Real-self spirituality ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အရွယ်ရောက်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို လိူက်လိူက်လည်းလည်းခံစားမိတယ်။
ကချင်စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရေး မိုးလွန်မှစတင်နိုင်မည်
ကိုးကွယ်ရာမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ရဲတိုက်
လားရှိုးမြို့က ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေ မရှိ (ရုပ်/သံ)
ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များ လျှော့ချနိုင်ပါက ဆန်စပါး ရောင်းဝယ်မှု ကဏ္ဍတွင် တရုတ်အခက်၊ မြန်မာအချက်ဖြစ်လာနိုင်
မင်းသားရဲတိုက် အာမခံနဲ့ ပြန်လွတ်လာပြီ
အုပ်စုဖွဲ့ ပြိုင်ကားမောင်း လူသတ်မှုတွင်ပါဝင်သူ ထောင်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍ သိန်းတစ်ရာဖြင့် အာမခံရ
`` ခါးတောင်ကျိုက်ခြင်းနှင့် တူသော ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အကြောင်း.....´´
Author: lubo601 | 4:52 AM |2Comments |
မြန်မာအမျိုးသားများ တစ်စုံတစ်ခုကို အားသွန်ခွန်စိုက် အင်အားသုံး ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အခါတွင် ခါးတောင်ကျိုက်လေ့ ရှိပါသည်။
ခါးတောင်ကျိုက်လိုက်သည့် အခါတွင် သန်မာထွားကျိုင်းသော မြန်မာအမျိုးသား ယောက်ျားတို့၏ အလှတရားသည် ထင်ရှားလာပါသည်။
Video လေးကိုအရင်ကြည့်ပြီးမှ အောက်ကစာပိုဒ်ကိုဖတ်ပေးပါ..ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ရဿလေးမို့ပါ ... ၅ မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပါ ဗျာ ..။
"ဒါရိုက်တာ လွင်ဗို (သို့မဟုတ်) ဒုက္ခိတသူရဲကောင်း"
၂၀၀၈ ခုနှစ်ဝန်းကျင် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာပေါ့ဗျာ ...
အဲ့ဒိအချိန်မှာ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ ဖလင် နဲ့ ရိုက်တဲ့ ကားကြီးတွေက တစ်နှစ်လုံးနေမှ တစ်ဒါဇင်လောက်ဘဲ ထွက်တော့တဲ့အချိန် ..
ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ လက်တင်အမေရိက ကလေးငယ် သုံးဆယ့်ငါးသန်းအတွက် ရှာကီရာဟာ
သူမရဲ့လုံးဝန်းတဲ့ တင်ပါးအိအိတွေကို ဝှေ့ရမ်းလှုပ်ခါပြစ်လိုက်တယ်
အင်ဂျလီနာဂျိုလီ လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီထဲကပန်းနုရောင်ပေါင်တံတွေဟာ
အဟာရချို့တဲ့နေတဲ့ အာဖရိက ဒုက္ခသည်တွေဆီ တဖွဲဖွဲဝင်လာမယ့် ရံပုံငွေတွေပဲ
Myanmar News Update's PhotosMyanmar News Update's Page
ရေးချင်နေတာကြာပြီ အခုမှ အချိ်န်လေးအားတုန်းရေးလိုက်အုံးမယ်
ကျွန်တော့်ကိုတော့ရိုင်းတယ်...နှာဘူးကျတယ်လို့တော့မမြင်စေချင်ဘူး.. (မြင်လိုကလည်းမြင်ပါ ).. ညီမလေးတွေ အစ်မတွေကိုကြိုပြောထားတာ..
"လျှာ နှင့် ဆေး" (မင်းလူ)
Author: lubo601 | 6:31 PM | No မှတ်ချက် |
မင်းလူ၏ ၀တ္တုတိုများ's Photos · မင်းလူ၏ ၀တ္တုတိုများ's Page
ဆေးဆိုလျှင် အရသာဆိုးသည်သာ များ၏။ ပို၍အစွမ်းထက်လေ ပို၍ခါးသီးလေပင်။ ဤသဘောတရားကား သဘာဝကျလေသည်။
ဆေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရောဂါပိုးတို့ကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ရန် ဖြစ်သည်။ ရောဂါပိုးမွှား ဆိုသည်မှာလည်း သွေးနှင့်ကိုယ် သားနှင့်ကိုယ်။ ချိုမြိန်သော အရသာကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ခါးသီးမှုကို ကြောက်လန့်ပေလိမ့်မည်။
Author: lubo601 | 5:49 PM | No မှတ်ချက် |
ဤကမ္ဘာလောကတွင်မိဘကျေးဇူးကိုအထူးသိ၊အထူးဆပ်လိုတဲ့သူတော်ကောင်းတိုင်းအတွက် အတုယူအားကျစရာ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဘ၀တစ်ပါးပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့မယ်တော် (သန္တုဿိတနတ်သား) ကို ဘ၀သံသရာ ၀ဋ်ဒုက္ခက လွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်တော်မူပြီး၊
Author: lubo601 | 5:41 PM | No မှတ်ချက် |
၁။ မနက်စာ မစားခြင်း
မနက်စာ မစားခြင်းကလည်း ဥာဏ်ထိုင်းစေပါတယ်တဲ့။ မနက်စာ မစားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကိုယ်တွင်း သကြားဓာတ် ပမာဏ ကျဆင်းပြီး ဦးနှောက်ကို လုံလောက်တဲ့ အာဟာရ မရောက်စေပါဘူး။
by Khin Maung Nyo (Notes) on Thursday, May 16, 2013 at 4:10am
Author: lubo601 | 5:08 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 4:55 PM | No မှတ်ချက် |
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ အူတူတူ အတတ ခပ်ကြောင်ကြောင် သူကြီးတစ်ယောက်ရှိပါသတဲ့....။
သူ့မှာ ထက်မြက်ပြီး ပြောရဲဆိုရဲ သားတစ်ယောက်လည်း ရှိပါတယ်။
တစ်နေ့တော့..... ရွာထဲမှာ ပြဿနာ တက်နေကျ ငမူး ဖိုးအေးနဲ့ တခြားရွာသားတစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြတယ်လို့ သူကြီးရဲ့ အထောက်တော်တွေက လာရောက် တင်ပြကြတယ်တဲ့....။
စိတ်ဖိစီးမှု ဟော်မုန်းများ လျော့နည်းပြီး ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်
by ရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည် (Notes) on Tuesday, December 4, 2012 at
သင့် Adrenal Gland မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖိစီးမှုဟော်မုန်း ကော်တီဇော ထွက်ရှိတဲ့အဆင့် လျော့သွားအောင် ပြုလုပ်နိုင်တာနဲ့ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ စိတ်ကျဝေဒနာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ထက်ဝက်ခန့် ကျဆင်းနိုင်တဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ဟာလည်း တစ်နှစ်အတွင်း ၁၀ ပေါင်ခန့် လျော့နည်းနိုင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ထုတ်ဖော် လိုက်ပါတယ်။ သင့်ဘဝမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဖိစီးမှုတွေကို မဖြေဖျောက်နိုင်ရင် ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကော်တီဇော မြင့်တက်မှုကို ရပ်တန့်နိုင်ပြီး နှလုံးကို ကာကွယ်နိုင်အောင် လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။
(၁) သစ်ကြားသီးစားပြီး ကော်တီဇော ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချပါ
၁၆ ရက် ၁၇ ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ (ပန်ဆန်း-မိုင်းပေါက်) အပိုင်း (၅)
by Ucs Jugger (Notes) on Tuesday, May 28, 2013 at 11:35am
ပန်ဆန်းမှာ မနက်စောစော(၆) နာရီထ ပန်ဆန်းမြို့ ဈေးထဲကိုပတ်ပါတယ်… ဈေးထဲ မှာ ဈေးရောင်းသူအများစုဟာ တရုတ်နဲ့ ရှမ်းတွေပဲများပါတယ်… ပန်ဆန်းမှာ ဈေးရောင်းတဲ့ရှမ်းအများစုကတော့ တောင်အောက် “ရှမ်း” (တိုင်းတဲ့)တွေများပါတယ်… ဈေးထဲ မှာ တိုင်းတဲ့ရှမ်းတွေရောင်းတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာစားပါတယ်…
မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ ၆ လုံး တည်ဆောက်ပြီးစီး
Author: lubo601 | 4:54 PM | No မှတ်ချက် |
မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်က ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာ တရုတ်အစိုးရပိုင် စွမ်းအင် ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ CNPC ကုမ္ပဏီက ရေနံသိုလှောင်ကုန် ၆ လုံးတည်ဆောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီ သိုလှောင်ကန်တွေကနေ တရုတ်ပြည်ကို သွယ်တန်းမယ့် ပိုက်လိုင်း ၁ ခုဟာလည်း လာမယ့် ၆ လ အတွင်းမှာ ပြီးစီးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by Soe Soe Win on May 27, 2013 at 16:05 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ပွဲတွေ့ပြီး အံဝင်ဂွင်ကျတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ စကားစုတွေ (tried and true words and phrases) ဟာ အသုံးဝင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ၄င်းတို့ဟာ အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ စကားလုံးတွေလိုပဲ တကယ့်ကို သည်းခံရခက်ပါတယ်။ စာရေးသူတစ်ယောက်က အသုံးများတဲ့ စံ (stock usage) အသုံးအနှုန်းတွေပေါ်မှာ အလွန်အမင်း အားထားပြန်ရင်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရေးအသားဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘဲ ငြီးငွေ့စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြလိုက်တဲ့ လွန်ကဲတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို သတိထားပါ။
1. After having (ပြီးနောက်)
After ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သည် "ပြီးလျှင်" ဖြစ်သလို Having ကလည်းပဲ "လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဟာ ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီ" ဆိုတဲ့ သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 4:52 PM | No မှတ်ချက် |
မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိုင်ငံရေး အကြမ်းဖက် လုပ်ကြံမှုကြီး ဆယ်နှစ်မြောက်
လားရှိုးမှာ ဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ သူနှင့် ပါတ်သတ်လို့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း ပြောကြားချက် (ရုပ်/သံ)
နိုင်ငံတ၀န်း ကျောင်းအပ်ရာတွင် အမျိုးမျိုးဖြစ်နေ
နံရံတွင် သမ္မတပုံဆွဲသူ ဒဏ်ငွေ ၁ သိန်း ချမှတ်ခံရ
ဘင်္ဂါလီသားဖွားနှုန်း ထိန်းချုပ်မှု လုံခြုံရေးအတွက်ဟုဆို
ကျေးရွာကျောင်းအုပ်ကို မကျေနပ်သဖြင့် ရွာလုံးကျွတ် ကျောင်းမအပ်
SEA Games ကို ဖိလစ်ပိုင် သပိတ်မှောက်မည်ဟုဆို
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ထိုင်းတော်ဝင်ဘွဲ့တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခံရ
လားရှိုးဆူပူမှု ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၅ ဦးဒဏ်ရာရ
ကေအိုင်အိုနှင့် အစိုးရ အချက် ၇ ချက် သဘောတူ
လားရှိုး မန်ဆူရှမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ ခန့် ခိုလှုံ
လာရှိုးမြို့ဈေးဆိုင်တချို့ ပြန်ဖွင့်၊ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်
ကွန်ဆူး မား's photo.
“ဒင့် ဘဝ ၊ ခဏဘယ်သူယူပါ့မယ်”
Min Din sharedaphoto.
၂၇၊ ၀၅၊၂၀၁၃ နေ့ထုတ် ဆဲဗင်းဒေးနယူးသတင်းစာ ။
မြူနှင်းတို့ဝေသောကာလ၊ ချမ်းမြမြဆောင်းတစ်ညတွင်၊ ယိုးဒယားနိုင်ငံ၊ ဖူးခက်မြို့အန်မခမ်အရပ်ရှိ အိမ်အိုကြီး၏ အပေါ်ထပ်၌ ကျွန်ုပ် ဆြာဒင်တစ်ယောက် ဇီးကင်းခန့်ရှိသော ချွေးစေးများပြန်လျက် တတိယတန်းဒေါင်းဖတ်စာတစ်အုပ်ကိုဖွင့်ရင်း ခုနှစ်သံချီ အော်ဟစ်ကာ စာအံလျက်ရှိလေသည်။
မိတ်ဆွေများ၊ မိဘများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကျောင်းဆရာဆရာမများက မကြာခဏ ဤမေးခွန်း ကို မေးမြန်း တတ်ကြပါသည်။ “ဒီမြို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး မြန်မာကျောင်းက ဘယ်ကျောင်းလဲ” ဟူ၍ ဖြစ်၏။
သင့်ကို ဝစေသော အချက်ရှစ်ရပ်
လင်း သက် postedaphoto to လင်းသက်၏ စာအုပ်ကမ္ဘာ's timeline.
Re-post By ACM 30-5-2013
အစားအသောက်တွေကို ပုံမှန် စားနေပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန် တက်မလာတဲ့သူတွေ ရှိနေသလို အစားအသောက်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး စားနေပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန် မကျသွားတဲ့ သူတွေလည်း ရှိနေပါ လိမ့်မယ်။ ဘာကွာခြားလို့လဲ ဆိုတာ သိချင်နေမှာပါ။
ပပ၀တီ - သောတာဆွေ
myanmaronlineteashop.com ၏ ကျေးဇူး
ကျွန်မတို့ အဘိုးအဘွားအိမ်က တောင်ကြီးမြို့ရဲ့အရှေ့ဖက် တောင်ခြေတစ်နေရာမှာရှိတယ်။ အိမ်ကရှေးအိမ်ဖြစ်ပြီး အိမ်ကိုခြံဝင်းကြီးရဲ့ တောင်ကုန်းကြီးတစ်ခုပေါ်မှာ တည်ထားတယ်။ လှေကားထစ် အခု(၅ဝ)ကျော်ကိုဖြတ်ပြီးမှ အိမ်ထဲရောက်နိုင်သလို ကားလမ်းဖက်ကနေ တောင်ကုန်းကိုပတ်ပြီးလည်း သွားနိုင်တယ်။ အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာ သစ်ပင်ကြီးငယ်တွေ အပြည့်စိုက်ထားတယ်။
၁၅ ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ (မိုင်းမော-ပန်ဆန်း) အပိုင်း (၄)
by Ucs Jugger (Notes) on Tuesday, May 28, 2013 at 11:05am
မနက်အိပ်ရာကထ တည်းခိုခန်းခ ယွမ်(၄၀) ရှင်းပြီး ပန်ဆန်းသွားဖို့ ကားဂိတ်ရှိရာ မိုင်းမော အလယ်တန်းကျောင်းနားကို သုံးဘီးတက္ကစီငှားပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်… အလယ်တန်းကျောင်းမှာ မြန်မာဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ ပညာမြင့်မှာ လူမျိုးတင့်မည်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ် ဆိုင်းဘုတ်ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်…
လားရှိုးမြို့ မှာ ယနေ့အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား တဦးသေဆုံး လေးဦး ဒဏ်ရာရ
ဆန္ဒပြအလုပ်သမားများကို ထိုက်သင့်သောလစာပေးရန် ဦးမြင့်ဆွေတိုက်တွန်း
ငါးနှစ်အောက်ကလေး လေးသောင်းခန့် ဝမ်းရောဂါကြောင့် နှစ်စဉ်သေဆုံး
ကျောင်းအပ်စဉ် အလှူငွေကောက်ခံမှုကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ တိုင်ကြား
မကွေးဆရာတော်ကို တိုင်းသံဃနာယကအဖွဲ့ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှု ပျက်ပြယ်
ပန်းတောင်း လယ်သမားတွေ ဆန္ဒထုတ်ဖော် (ရုပ်/သံ)
မြေသိမ်းမှု၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကရင်တပ်ဖွဲ့များကို အစိုးရ သတိပေး
လားရှိုးပဋိပက္ခတွင် သတင်းထောက်တဦး အတိုက်ခံမှုအပေါ် ရှုတ်ချကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်
လားရှိုးသတင်းယူနေသည့် ရုပ်သံသတင်းသမား ၂ ဦး တိုက်ခိုက်ခံရ
တရုတ်ဆန်များတွင် ကက်ဒ်မီယံဓာတုပါဝင်မှု မြင့်မားနေကြောင်းတွေ့ရှိ
(၁) တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုအဖော်ပြုပေးသူမရှိတဲ့
သီချင်းနားထောင်ပါ၊ စာဖတ်ပါ၊ စာရေးပါ။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်။
Author: lubo601 | 6:45 PM | No မှတ်ချက် |
ဒေါ်စု စေတနာကို ကြည့်တတ် မြင်တတ်ရင်ကျေးဇူးတင်မှာပါ
Author: lubo601 | 6:45 PM | 1 Comment |
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၀၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၂ မိနစ်
မြန်မာပြည်ခေတ်သစ် ရာဇဝင်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မှီသည့်လူ တဦးတယောက်မှ မရှိပါ။ ငယ်ရွယ်စဉ် နိုင်ငံရေး သမားပေါက်စဘဝမှာ အင်္ဂလိပ်ကို လက်နက်ကိုင် တိုက်မှရမည်ဟု သန္နိဋ္ဌာန်ချခဲ့စဉ်က ဂျပန်တွေဆီမှ စစ်ရေး ပညာသင်ကာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်ကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရမည့် အချိန်မှာ မကြောက်မရွံ့တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူများသည် အင်္ဂလိပ်နှင့် ဂျပန်စစ်တပ်တို့အကြား ကြေမွအောင် အဖျက်စီးခံ၊ အနှိပ်အစက်ခံ ခဲ့ကြရသည်။ စစ်ဦးဘီးလူး ဆိုသလိုဂျပန်တွေ အတက်မှာ စစ်နိုင်ရေး သက်သက်အတွက် ဗုံးမိုးရွာခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်တွေက ရှိသမျှအားလုံး မီးရှို့ပြီး ဆုတ်ခွာသွားကြသည်။ မြေဇာပင်အဖြစ် ထီးထီး ပျက်စီးကျန်ရစ်ခဲ့တာကမြန်မာပြည် မြို့အသီးသီး။
~Spirituality Vs Materiality~ စိတ်တန်ဖိုး နဲ့ ရု...
`` ခါးတောင်ကျိုက်ခြင်းနှင့် တူသော ပညာရေးစနစ် ပြုပြ...
ဘင်္ဂလီကိစ္စ ဒေါက်တာ ဒေါ်ရင်ရင်နွယ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန...
စိတ်ဖိစီးမှု ဟော်မုန်းများ လျော့နည်းပြီး ကျန်းမာရေး...
၁၆ ရက် ၁၇ ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ (ပန်ဆန်း-မိုင်းပေါက်) အပ...
တိုင်းရင်းသား အရေးကို Low politics views ဖြင့် ချဥ...
၁၄ ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ (ချန်ယန်-မိုင်းမော) အပိုင်း (၃)
အပျိုရည်ပျက်မှာကြောက်သော ခရိုနီများနှင့် ပြန်လည်ထူ...
Facebook အကောင့် ဖွင့်မရခြင်း အကြောင်း/ Block ခံရြ...
၁၃ ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ (ဟိုပန်-ချင်းရွှေဟော်-မိန်းတင်-ခ...
မှတ်တမ်းရေးပုံရေးနည်း (How To Write A Memo)
ကြက်သွန်နီလှီးနည်း ၊ ပန်းကန်ဆေးနည်း ၊ အကျီင်္ခေါက်နည...
L o vep h obi a
~ သူ ~
အများပြည်သူများ ရှောင်ရှားသင့်သော လုပ်ဆောင်ချက်မျာ...
၁၁ ရက် ၁၂ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ (မန္တလေး-လားရှိုး-ဟိုပန်) အ...
Federalism Lecture (စာရေးဆရာကျော်ဝင်း)
ဘီသိုဗင်၊ မဟာဇနက်နဲ့ အတွေးကွန်ယက်
ကိုယ့် page ကို အမြဲ အထာကျကျ အဆင့် တစ်ခုရှိတဲ့ pag...
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၂၄-၅)
အမိုက်ကောက်ခွင့်သာပြုရင် လေးလအတွင်း စင်င်္ကာပူကို မီ...
If you give alitle love you can get alitle love o...
♥ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ♥
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး....သို့မဟုတ် Revolution & Evo...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ရေးသူ-ေ...
" မှန်မကြည့်သူတို့၏ အကြီးစားဟာသ "
Cute & Lovely Kids Dance
“နိုးတူး၊ နို့တစ်လုံး၊ နှိုးတစ်လုံး..တို့နှင့် ပတ်သ...